avylavitra · Mey 2017 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Mey, 2017
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Mey, 2017
Azia Atsimo 30 Mey 2017
Ny Bilaogy ‘Untranslatable / Tsy Mety Adika’, Mikosoka ireo Voambolana Tokan'ireo Fiteny Madinika
Fiteny 26 Mey 2017
Fantatrao ve ny dikan'ny hoe "vakasteglok" avy amin'ny fiteny Mwotlap? Ary manao ahoana ny momba ny "kwadi" avy amin'ny fiteny Hunsrik ?
Azia Atsinanana 22 Mey 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Mey 2017
Miankina amin'ny fijerena ara-bakieny ny volana vaovao ny fiandohan'ny volana masin'ny Ramadany, miteraka datin'andro samihafa ho fanombohana azy any anivon'ireo sekta Miozolmana isankarazany. Tamin'ny taona 2009 ny Sionita sy ny Shiita tao Bahrain dia niaraka nanomboka ny volana taminà andro iray - ary nankalaza izany firaisana tsy fahita firy izany ny bilaogera iray.
Azia Atsinanana 20 Mey 2017
Tanàna ve sa firenena iray i Singapaoro? Toa adaladala ihany io fanontaniana io satria fantatra erantany i Singapaoro amin'ny maha-firenena mahaleotena azy. Saingy ho an'ny Ministry ny Lalàna ao Singapaoro, K. Shanmugam, tokony ho toy ny fitondra tanàna iray no hitondràna an'i Singapaoro. Niteraka adihevitra tao amin'ny haino aman-jery sosialy io fanamarihany io.
Afrika Mainty 19 Mey 2017
Efa tany amin'ny 2010 ny raharaha iray momba an'i Diodino Cambaza, ilay filoha taloha tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny seranampiaramanidina ao Mozambika .